वि. सं. २०७८ जेठ २८ गते, शुक्रवारको राशिफल - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ जेठ २८ गते, शुक्रवारको राशिफल
इनेप्लिज २०७८ जेठ २८ गते १:५२ मा प्रकाशित
शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। तपाईंको केटाकेटीको जस्तो र निर्दोष व्यवहारले परिवारको समस्या समाधान गर्नमा एउटा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। आफ्नो प्रिय संगै नभएकोले तपाईंले आज परम आनन्दबाट खाली भएको अनुभव गर्ने सम्भावना छ। तपाईंमा धेरै हासिल गर्ने क्षमता छ – त्यसैले तपाईंको बाटोमा आएका अवसर नछोड्नुहोस्। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई आफ्नो नराम्रो पक्ष देखाउन सक्छ।
आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। मित्र र जोडीले तपाईंलाई सान्त्वना र आनन्द दिनेछन्, अन्यथा यो एउटा नीरस र ढिलो दिन हुनेछ। आज प्रेममा आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। लामो समय पछि, तपाईं र तपाईंको जोडीले कुनै झगडा र तर्क बिना केवल प्रेम साथ शान्तिमय दिन बिताउनु हुनेछ।
तपाईंलाई ढाक्ने र तपाईंको प्रगतिमा बाधा गर्ने दुःखलाई टाढा फ्याँकिदिनुहोस्। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। तपाईं मेहनत र धैर्य मार्फत आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। तपाईंलाई आज आनन्दित वैवाहिक जीवनको महसुस कसरी गरिन्छ भन्ने महसुस हुनेछ।
ध्यानले राहत ल्याउनेछ। तपाईंको लापरवाही मनोवृत्तिले आमाबाबुको चिन्ता बढ्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि उनीहरूलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ। आफ्नो साथीको अभावमा पनि उपस्थिति महसुस गर्ने सम्भावना छ। तपाईंले आज उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि आफुले सकेसम्मको सबै प्रयास गर्नु पर्छ। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। आफ्ना बच्चाको एउटा पुरस्कार समारोहमा निमन्त्रणा गरिएकोमा तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ। तपाईंले आशा गरे झैं उसले उन्नति गरेकोमा तपाईंको सपना साँचो भएको पाउनु हुनेछ। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने – तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।
भावनात्मक रूपमा तपाईं धेरै स्थिर हुनु हुँदैन – त्यसैले अरूको अगाडि कसरी व्यवहार र कुरा कसरी गर्नु भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो घर र घरको वरिपरि केही प्रमुख परिवर्तन गर्ने धेरै सम्भावना छ। तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्। कुनै पनि नयाँ संयुक्त उद्यममा आफैलाई संलग्न गर्नबाट जोगिनुहोस् – र तपाईंलाई आवश्यक भएमा आफ्ना घनिष्ट मान्छेको सल्लाह लिनुहोस्। विवाह भनेको एकै छानो मुनि बस्नु मात्र होइन। आफ्नो साथीसँग केहि समय बिताउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तपाईंले आफ्नो शरीर रिचार्ज गर्न पुरा आराम गर्नुपर्छ अन्यथा थकानले तपाईंलाई निराशावादी बनाउन सक्छ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले चिन्ता गराउँछ र उनलाई केही चिकित्सा हेरविचारको आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंकी प्रियतमाका कठोर शब्दहरूले तपाईंको मुड व्यग्र हुन सक्छ। तपाईंले प्रत्येक कदममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नुभयो भने – सफलता निश्चित तपाईंको हो। आज तपाईं एउटा तारा झै व्यवहार गर्नुहोस् – तर केवल प्रशंसनीय कुरा गर्नुहोस्। आज आफ्नो जोडीले तपाईंसँग बसेको विषयलाई लिएर केही नराम्रो कुरा भन्न सक्छन्।
परिवारका सदस्यहरूको मद्दतले तपाईंको आवश्यकतामा ध्यान दिनेछ। आज तपाईंको प्रेम साझेदारले तपाईंलाई केही साँच्चै सुन्दर वस्तु दिनेछ। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
आफ्नो उँचो ऊर्जा आज सदुपयोगको लागि खर्च गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो राय छोराछोरीलाई जबरजस्ती थोप्नाले तिनीहरूलाई परेशान गराउन सक्छ। तिनीहरूलाई बुझाउनु राम्रो छ, जसले गर्दा तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकून्। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई गलत हो भन्नाले पूरा दिन विरक्तलाग्दो हुन सक्छ।
अरूको आवश्यकता तपाईंको इच्छासँग तपाईंलाई हेरचाह गर्न हस्तक्षेप गर्नेछ – आफ्ना भावनाहरू नरोक्नुहोस् र आराम गर्नको लागि तपाईंले चाहेका कुराहरू गर्नुहोस्। कल्पनामा पछि नपर्नुहोस् र धेरै व्यावहारिक हुने प्रयास गर्नुहोस् – आफ्ना साथीहरूसँग केही समय बाँट्नुहोस् – यसले तपाईंलाई धेरै राम्रो गर्नेछ। आज केही प्राकृतिक सौन्दर्यद्वारा तपाईं चकाचौंद हुने सम्भावना छ। सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्न राम्रो तरिकाले योजना बनाउनुहोस् – कार्यालयको समस्या सल्टाउने प्रयास गर्दा तनाउले तपाईंको मन ढाकिदिन्छ। तपाईं लामो समयबाट श्रापित महसुस गर्नु हुँदै थियो भने, आज तपाईं आशिष पाएको महसुस गर्नु हुनेछ।
खोलेर राखेको खाना नखानुहोस् किनकि यसले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। एउटा आश्चर्यको सन्देशले तपाईंलाई राम्रो सपना दिनेछ। तपाईंको हावी मनोवृत्तिले आफ्ना सहकर्मीबाट आलोचना हुनेछ। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।